News Collection: विश्वले खोज्दैछ- नेपाल कहाँ छ ?
विश्वले खोज्दैछ- नेपाल कहाँ छ ?
उमेश श्रेष्ठ, काठमाडौँ, मंसिर २६- नेपालमा भ्रमण वर्ष २०११ मनाउने तयारी हुँदै गर्दा धेरैलाई नेपाल भन्ने देश कहाँ छ भन्ने पत्तै छैन। प्रख्यात सर्च इन्जिन गुगलमा नेपाल कहाँ छ (ह्वेयर इज नेपाल) भनी खोज्नेहरुको संख्या यो वर्ष ५० प्रतिशतले बढेको छ। यसरी खोज्नेहरु मध्ये सबैभन्दा बढी अमेरिकाका प्रयोगकर्ता छन्। नेपाल कहाँ छ भनी खोज्नेहरुमध्ये दोस्रो संख्या बेलायतमा रहेको गुगलले जनाएको छ।
अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरुमध्ये नेपाल खोज्नेहरुको संख्या न्युयोर्क र टेक्सस राज्यमा बढी छ। तेस्रो स्थान क्यालिफोर्नियाले ओगटेको छ। अलास्का, अलाबामा, अर्कान्सन, एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया नेपाल खोज्ने राज्यहरुको टप टेन सूचिमा पर्छ।
त्यसैगरी देशहरुमा नेपाल कहाँ छ भनी खोज्नेहरुको शीर्ष दस स्थानमा मध्यपूर्वको देश संयुक्त अरब इमिरेट्स तेस्रो नम्बरमा पर्छ। दक्षिण एसियाली देश अफगानिस्तानमा पनि नेपाल खोज्नेहरु रहेछन्। अफगानिस्तान गुगलको सूचि अनुसार चौथो नम्बरमा पर्छ। त्यसैगरी पाँचौदेखि दशौँ स्थान क्रमशः अल्बानिया, आर्मेनिया, अंगोला, अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया र अस्ट्रेलियाले ओगटेको छ।
गुगलमा यो वर्ष नक्सा खोजी गरिएकामध्ये छैटौँ स्थानमा सगरमाथा (माउन्ट एभरेस्ट) परेको छ।
मनोरञ्जनको क्षेत्रमा यो वर्ष सबैभन्दा बढी किशोर गायक जस्टिन बिबरलाई खोजिएको छ। त्यसपछिको स्थान शाकिरा र एमिनेमले लिएका छन्।
इलेक्ट्रोनिक्स सामानमध्ये यो वर्ष आइप्याडको सर्वाधिक खोजी भएको छ। आइफोन फोर दोस्रो र नोकिया ५५३० तेस्रो स्थानमा छ।
समाचारहरुमा हाइटी बढी खोजिएको छ। दोस्रो स्थान बेसिक्टास र तेस्रो स्थान चिलीले लिएको छ।